Travel Testimonials | Customer Reviews | Tour Feedback
Mirehareha amin'ny fanantenana tsara avy amin'ny mpanjifanay izahay; Na izany aza, dia miezaka mafy isika hanatsara hatrany ny fitantanan-draharahantsika. Ny fandrenesana ny zavatra ilaintsika amin'ny mpanjifa dia mihevitra fa tsy maintsy ilaina ny mahita ny fomba ahafahantsika manatsara ny fiaranay, ny fonosana amin'ny fitsangatsanganana, ary ny tolotra hafa ho an'ireo mpitsidika hoavy. Manentana ny mpanjifanay izahay hanome anay ny fampidirana azy ireo, na tsara na ratsy, mba hahafahantsika manompo bebe kokoa ny mpanjifa any aoriana.
Sand Pebbles no iray amin'ireo mpizaha tany tsara indrindra any Odisha. Izaho sy ny fianakaviako dia nandeha tany Bhubaneshwar, Puri tamin'ny herintaona. Nahavariana ny fanandramana tamin'ny vatokely sandoka, nahay namaky sy nanampy azy ireo mpikambana.
Ny fahaizana momba ny fitetezam-peo dia tsara. Fandefasana lakolosy koa ny pocket friendly. Nahita vatokilanana izahay rehefa nikaroka tao amin'ny aterineto ny Bhubaneshwar Tour Package. Hanolotra tifitra fasika fasadrano sy mandeha aho raha mikasa ny hitsidika an'i Odisha.
Fahatsiarovana tsy hay hadinoina ny Tours sy ny Travel Sand Pebbles. Ny saran-dàlana dia tolotra ara-dalàna sy matihanina. Amin'ny ankapobeny, ny traikefa mahafinaritra amin'ny vatokely fasika.
Ny sehatra eo an-toerana eo an-toerana ihany koa dia nitarika tsara ny torolalana mora tazana niaraka tamin'ny fiara tsara tarehy. Azoko lazaina amin'ny farany fa avy amin'ny fandehanana mankany amin'ny trano fandraisam-bahiny ny zava-drehetra dia nanjavona ary voalamina tsara. Miandrandra fialantsasatra bebe kokoa amin'ny Sand sy Pebbles.
Iray amin'ireo traikefa tsara indrindra azonao atao amin'ny vatokely fasika, mamelany anao amin'ny fientanentanana sy fahafinaretana. Tsy maintsy mitsidika ny olona iray miaraka amin'ireto lehilahy ireto. Ny fiarovana, ny fahafinaretana ary ny fandaniana rehetra dia ny fikarakarana rehetra amin'ny vato kesika.
Raha mandeha irery ianao na miaraka amin'ny fianakaviana dia tsy maninona satria manana izany izy rehetra. Jereo ianao atsy ho atsy amin'ny vatokely sand. Ny fotoana manaraka hitanao izany dia mamaky izany ianao ary manao izany ho toerana handehananao.